Rabshado ka dhacay Mareykanka iyo Joe Biden oo loo aqoonsaday madaxweynaha xiga | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Rabshado ka dhacay Mareykanka iyo Joe Biden oo loo aqoonsaday madaxweynaha xiga
Rabshado ka dhacay Mareykanka iyo Joe Biden oo loo aqoonsaday madaxweynaha xiga
Kaddib maalin ay socdeen fowdo iyo mudaaharaadyo rabshado wata oo ay dhigeen taageerayaasha Trump, Koongaraska Mareylanla wuxuu shahaado siiyay Joe Biden iyo Kamala Harris si ay noqdaan madaxweynaha xiga iyo madaxweyne-ku-xigeenka Mareykanka.
Tallaabadaan ayaa muujineysa in uu dhammeystirmay geeddi-socodka doorashooyinka Mareykanka ee 2020 waxaana la caddeeyay in Biden loo caleemo-saari doono madaxweyne 20-ka Janaayo, iyadoo aan la eegeyn diidmada Madaxweyne Donald Trump ee dhanka tartanka doorashooyinka.
Afar qof ayaa dhimatay 52 kalena waa la xiray ,ka din markii taageerayaasha Trump ay xoog ku qabsadeen xarunta US Capitol ee magaalada Washington, DC, sida uu xaqiijiyay,Taliyaha Booliska Robert Contee .
Dadka dhintay waxaa ku jiray laba haweeney ah oo ay toogteen booliska Mareykanka iyo laba kale oo rag ah,kuwaas oo ku dhintay xaaladaha degdega ah ee caafimaadka.
Jamhuuriyiinta iyo Dimuqraadiyiintu ayaa si wdajir ah u cambaareeyay rabshadaha dadka shacabka ah ee ka dhacay Xarunta Capitol, iyagoo iska fogeeyay sheegashooyinka musuqmaasuq ee doorashada ee Trump ku tilmaamay mid aan ansax ahayn.
Maqaal horeSuuqyada Garoowe oo maanta markale laga diiday isticmaalka shilinka Soomaaliga ah
Maqaal XigaMaamulka Gobolka Banaadir oo ka hadlay qaraxa ka dhacay Muqdisho